साइवर आक्रमणबाट कसरी सुरक्षित राख्ने कम्प्युटर र डाटा ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा :: BIZMANDU
साइवर आक्रमणबाट कसरी सुरक्षित राख्ने कम्प्युटर र डाटा ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा
प्रकाशित मिति: May 19, 2017 5:13 PM
विश्वभरी नै भएको साइवर आक्रमणपछि धेरै संघ संगठन, संस्था, कम्पनी र आममानिस साइवर हमलाबाट कसरी आफ्नो कम्प्युटरलार्इ बचाउने भन्ने कुरा सोचिरेका छन्।
तपार्इं आफ्नो सिस्टम अपडेट गर्नका लागि एन्टिभाइरसको प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटरलार्इ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तपार्इं आफ्नो कम्प्युटरमा इमेल चलाउँदा धेरै चनाखो हुन जरुरी छ आफ्नो डाटाको ब्याकअप नियमित रूपमा सन्तुलन राख्नुहोस्।रेनसमवेयरको शिकार भएका मानिसले यो कुरा पहिल्यै बुझ्नुपर्ने हो कि के फिरौती बुझाएपछि पनि के कम्प्युटर अनलक हुन्छ ?
दोषी भाइरसको नाम वानाक्राइ हो। यसलार्इ वार्म नामका एक कम्प्युटर भाइरसको माध्यमबाट फैलाइएको अनुमान छ।
भाइरस फैलिने मामलामा मानिस धेरै विश्वास गर्छन्। यसमा कुनै मेलको माध्यमबाट एक लिकंमा क्लिक गर्नका लागि उकास्ने गरिन्छ। एक पटक वानाक्राइ तपार्इंको कुनैपनि नेटवर्कको सिस्टममा प्रवेश भइहाल्यो भने शिकार बनाउन सक्ने मसिनहरुको खोजी गर्दछ।
अहिले कसले आक्रमण गर्यो भन्ने बारेमा पक्का जानकारी छैन तर, केही जानकारहरुले भनेका छन् यो कुनै ठुलो सफ्टवयर होइन।
साइबर चोरहरुका लागि रेनसमवेयर एक राम्रो हतियार हो। उनीहरुले यसलार्इ एक राम्रो पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्।भर्चुअल करेन्सी बिटक्वायनको माध्यमबाट सुरक्षा एजेन्सीहरुलाई अपराधी समक्ष पुग्न मुस्किल छ।
साइवर आक्रमणबाट कसरी सुरक्षित राख्ने कम्प्युटर र डाटा ? यसरी बचाउनुस् कम्प्युटर र डाटा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
ग्लोबल आइएमइमा माछापुच्छ्रेका सुमन शर्मा 'सेकेन्डम्यान', जोखिम नियन्त्रणमा अब्बल
काठमाडौंका मेयर स्मार्टसिटी अध्ययनका लागि घुमेको घुम्यै, कोरियाको भ्रमणपछि गए स्पेन
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमले मागे कर्मचारी, बैंकमा ५७१ र एनटिसीमा ३८ जना माग
पूँजी बढाउन ब्याज नपाकेको ऋणलाई पनि आम्दानी देखाएर बोनस सेयर बाँड्न छुट
गभर्नर इजिप्टबाट फर्केपछि राष्ट्र बैंकमा फेरि तात्यो '३० बर्षे' लफडा, ब्यक्तिगत प्रलोभन देखाइयो
दसैंका लागि हवाइजहाजका सबै टिकट सकिए, अतिरिक्त उडानको तयारी गर्दै कम्पनी